Semalt: Iikhohlisi ze-Intanethi zichazwe
Ubuqhetseba be-Intanethi ngenye yezona zilahleko ezilahlekileyo zemali kwi-Intanethi. IzingaUkuhamba nge-intanethi ngenxa ye-scams kuyinqanaba eliphazamisayo. I-United States ibhale ilahleko ezifikelela ngaphezu kwe-$ 525 yezigidi, umyinge we $ 1,813 nganyeIxhoba ngokweNational White Collar Crime Centre - humaine outil gestion planification. Ubuqhetseba be-intanethi eUnited States baba malunga neepesenti ezingama-90 zexabisoubuqhophololo kwi-intanethi kwihlabathi. Yisongelo efuna ingqalelo ngokukhawuleza.
Amasebe asePolisa asebenza kwi-cybercrime kwihlabathi jikelele kwi-investing systemsukulwa nobuqhetseba be-intanethi kwaye kuyacetyiswa ukuba amaxhoba angabika imali okanye nayiphi na enye inkohliso eyenzeka kwi-Intanethi. Nangona kunjalo,Abasebenzisi be-intanethi bangahlala beqaphele ngokufunda amanqaku kwi-intanethi ye-intanethi njengeBlogs Watch Watch phakathi kwezinye izinto. Naziiinketho ezininzi malunga nokukhwabanisa kwe-intanethi kunye ne-Federal Trade Commission (FTC) njengenye yeyona mibutho ethembekileyomsebenzi.
Amanyathelo alandelayo alandele ukukhwabanisa i-intanethi ayatholakala kwi-intanethi, kodwa kuqala aphaezinye iindlela eziqhelekileyo, ukusuka kwiingcali ezikhokelayo iSemalt ,UJason Adler, esetyenziswe ngabakhohlisi kwi-Intanethi.
Kukho ezininzi iintengiso kwi-intanethi ezikhanga abantu ukuba bajoyine amaqela. Shishiniizikhwabaniso ezenzelwe ukukhwabanisa i-intanethi zifuna imali emininzi ngokuthatha inxaxheba kunye nokwenza imisebenzi encinci ye-intanethi kodwa idinga ukusayina nokuthumelaimali yobulungu, uqeqesho, iifizi okanye ukufumana into ethile. Ekugqibeleni, ijika ibe yinto yokulala. Lumnka.
Ubume bokuba ukweba
Ngo-2004, ukwebiwa kwezazisi kubhalwa kwisikhalazo esiphezulu somthengi eUnitedStates. Ubungozi bebu buqhetseba be-intanethi bunzima kangangokuthi kunokukhokelela ekulahlekelweni ngokupheleleyo kwemali kwi-akhawunti yebhanki yexhoba. KuleKwimeko, abaqhophololo bafihla ubungqina babo ukuba bafikelele kwi-akhawunti yeekhredithi ze-victims. Amaxhoba kufuneka axelele iibhanki, i-credit bureau okanyeingxelo kwipolisa ngokukhawuleza.
I-Web Database I-Scam
Ulwazi lomntu siqu njengelayisenisi yokuqhuba kunye nepasipoti esetyenziswe zizibhedlele,iibhanki, kunye nemibutho karhulumente inokufumaneka rhoqo ngamaqhetseba kunye nokwenza uluntu kwi-intanethi. Ulwazi lufikelela kwi-Intanethiukuhlambalaza ukusetyenziswa gwenxa kunye nokukhethwa kwe-cherry. Ubuqhetseba be-intanethi obandakanya ukukhwabanisa kwedatha kufuneka kwaziswe kwiinjongo ezifana neGoogle, Yahoo,kunye ne-Bing ukuze ususwe.
Ubuqhetseba be-intanethi buya kuba ngethuba le-imeyli ecela uncedo lwemali. Iabaqhophololo badonsa i-akhawunti ye-imeyile yomhlobo wexhoba kwaye bacele uncedo lwezemali nge-Western Union. Kukho iingcebiso ezininziI-PCMag ukuphepha le fom ye-intanethi.
Ubuqhetseba be-intanethi buya kufana nefantasy. Kwakhona kuthiwa yi-catfish,Utshutshiso lomtshato lubandakanya umntu othi unothando kunye nexhoba. Umtshutshisi uyalalisa ixhoba ukuba abathumele imali yokuhamba okanye yezokwelaphaindleko. Musa ukuthumela izipho kubantu obaziyo.
Intengiso yabathengi kunye neenkampani zangaphandle
UNxibelelwano lwaBathengi bamazwe ngamazwe kunye noNxibelelwano loNxibelelwano lunenkquboejongene nobuqhetseba be-intanethi obandakanya ukuhlawulwa kwabanikezeli be-intanethi abanganikeli iimveliso. Xa umyalelo we-intanethi ungafikiumthengi, umntu kufuneka abike isiganeko ngoncedo.
Inkohliso ye-intanethi ye-Intanethi
Ugaxekile lunokubangela ukuhlaselwa. Qhagamshelana neKhomishana yoThutho kunye noTshintshisoxa uwa lixhoba logaxekile liphendukile.